Tani waa waxa Apple ku soo bandhigi doonto berri munaasabadda sida ay sheegayaan xanta. | Waxaan ka socdaa mac
Hada waa inaad taas ogaataa berri 10 19 abbaare 00:XNUMX pm, Apple waxay bilaabi doontaa dhacdo cusub oo khadka tooska ah ah taas oo Mac-yada cusub ee Apple Silicon la filayo in lagu soo bandhigo iskaashi. Wararka xanta ah ee arintan kusaabsan shaki la'aan, runti waa iska cadahay in Mac-yada cusub lasoo bandhigi doono processor-kan cusub Muhiimadu waxay tahay inaan si fiican loo aqoon noocyada kumbuyuutar ee la soo bandhigi doono. Xanta ayaa tilmaamaysa inay jiri karaan ilaa 4 nooc.
Berri galab ayaa la shaacin doonaa nooca Mac ee Apple Silicon lagu rakibay. Waxay noqon doonaan cutubyadii ugu horreeyay ee suuqa ku soo dhaca processor-kan cusub. Waxaa sidoo kale la ogyahay in Apple ay bilaabi doonto nuqulkii ugu dambeeyay ee macOS Big Sur oo sida guvelada ula guursan doona processor-yada cusub. Qaar ka mid ah jajabyo cusub taas oo ballanqaadeysa xawaare sare, maareyn batteri oo ka wanaagsan, kuleyl yar oo u oggolaanaya batteriga inuu sii dheeraado.
Wax walba waxay umuuqdaan inay kufiicanyihiin qashinka cusub waana mid aad muhiim u ah in si wanaagsan loo doorto kumbuyuutarada lagu dari doono marka hore Xanta ayaa soo jeedinaysa marka hore Macs la doortay ayaa noqon doona:
MacBook Pro sidoo kale 13 "
Naqshadeynta labada laptop ayaa sii ahaanaya mid la mid ah ama aad ugu eg kan hadda jira, si fudud gudaheeda waxaan uga gudbi doonnaa inaan yeelano Intel chip oo aan u gaarno Apple Silicon chip oo leh faa'iidooyinka aan horay u soo sheegnay, iyo kuwo kale. Waxaan leenahay suurtagalnimada 16 ”MacBook Pro ah oo la soo bandhigo laakiin waa wax yar oo khatar ah in lagu qoyo tusaalahan, maxaa yeelay nooc cusub lama sii deyn muddo dheer Waxa ugu nabdoon ayaa ah in la xusay, laakiin si dhakhso leh looma bilaabi doono, laakiin waxay qaadan doontaa wakhti in lagu arko suuqa. Waa inaad ixtiraamtaa waqtiyada.
Saddexdaan moodel kuma arki doonno isbeddelada ku dhaca banaanka kumbuyuutarrada. Waxay noqon doontaa oo kaliya gudaha isbeddelaya iyada oo ay ugu wacan tahay Apple Silicon iyo macOS Big Sur. Daawada bilicsanaanta ayaa hadhay markii dambe. Waxaa loo maleynayaa in bartamaha-2021 naqshadahan cusub lagu dari doono. Waxaan u badan tahay inaan arki doonno miniLED oo maxaa diidaya, shaashado 14-inch ah halkii 13.
Aad uma badna in la arko iMac leh Apple Silicon. Waxaan runtii jecel nahay fikradda kombiyuutarada cusub ee 24-inji iyo 32-inji ah dhawaan ayaa soo muuqday, laakiin waxaan ka baqayaa inay halkaa ku sii sugnaato. Fikrad ahaan. Berri shaki ayaan ka tagi doonaa waana arki doonaa ilaa heerka xanta ay sax noqotay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Tani waa waxa Apple ku soo bandhigi doonto berri munaasabadda sida ay sheegayaan xanta.
Reolink Argus 3, oo ah kamarad amniga dibadda aad u dhameystiran